Izinguzunga zeqhwa zase-Asia ziyancibilika ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ososayensi babeka umkhawulo wokwanda kwamazinga okushisa aphakathi komhlaba ku-2 ° C. Kungani lokho kushisa? Ucwaningo oluhlukahlukene lukhombisa ukuthi kusukela kulokhu kushisa kwamazinga okushisa omhlaba, izinguquko emvelweni kanye nokusakazwa komhlaba nomoya, ushintsho olwenziwe lungeke luguquke futhi lungalindeki ngokuhamba kwesikhathi.
Ngalesi sizathu, ukuhlala ngaphansi kuka-1,5 ºC wokushisa komhlaba kungenye yezinhloso eziphakanyiswe yiSivumelwano SaseParis nokuthi amazwe angama-195 avumile ukubheka njengomkhawulo wokuphela kwekhulu leminyaka. Noma kunjalo, Ama-65% wesisindo seqhwa eliphakeme lezintaba e-Asia singalahleka uma ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kuqhubeka kanjena. Ngabe izinguzunga zeqhwa zase-Asia ziyancibilika?
1 Isifundo se-Glacier yase-Asia
2 Ukuhlolwa komthelela nemiphumela
3 Imiphumela yokulahleka kweqhwa
Isifundo se-Glacier yase-Asia
Ucwaningo, oluholwa yi-University of Utrecht (Holland), luveza ukuthi kuze kufike ku-65% wobuningi bezinguzunga zeqhwa ezintabeni e-Asia kungalahleka ngaphansi kwesimo samazinga aphezulu aqhubekayo wokukhiqizwa kwegesi yokushisa.
Uma ukungcola kuqhubeka ngezinga elisheshisiwe futhi elandayo abenza ngalo namuhla, izwekazi lase-Asia lizobhekana nokulahlekelwa okukhulu kweqhwa lokho kungaphazamisa imvelo yemvelo futhi kungaletha imiphumela emibi yokulethwa kwalezi zindawo eziphila ngakho. Amanzi okuphuza, amadamu kanye namadamu aphehlwa ngamanzi azosongelwa ukwehla kobuningi balezi zinguzunga zeqhwa.
Ezifundeni lapho amanzi ancibilikayo avela ezinguzungeni zeqhwa ebalulekile ekugelezeni kwemifula nasempilweni yezimbali nezilwane ezihambisana nazo. Ukuxhashazwa kwemifula yokuchelela izitshalo namasimu elayisi anikezwa ngamanzi avela ezinguzungeni zeqhwa kungancipha ukunyamalala kwawo.
Ngokushisa okuphezulu okushisa ngenxa yokukhishwa kwegesi lokushisa okwenzeka eChina, njengoba i-60% yenhlanganisela yamandla isuselwa ekushisweni kwamalahle, imvula enesimo seqhwa inyusa izinga layo eliphansi futhi izinguzunga zeqhwa zilahlekelwa isisindo nevolumu.
Ukuncipha kokugeleza komfula kungaholela ezinkingeni ezihlobene nokukhiqizwa kokudla namandla, okungaba nazo zonke izinhlobo zemiphumela emibi ye-cascading.
Ukuhlolwa komthelela nemiphumela
Ukuhlola umthelela ukulahleka kwalezi zinguzunga zeqhwa okuzokuveza ekuhlinzekelweni kwamanzi, ezolimo kanye nasemadamu okwenziwa ngogesi, ochwepheshe abasebenza kulolu cwaningo olushicilelwe ephephabhukwini i-Nature basebenzise imithombo eminingi yemvula nemininingwane yokushisa okuvela esimweni sezulu samanje. Ngokufanayo, zazisuselwa kwimininingwane yesathelayithi, imodeli yesimo sezulu yokuqagela kwezinguquko emvuleni nasemazingeni okushisa afinyelela ku-2100, futhi basebenzise nemiphumela yokusebenza kwabo ensimini okwenziwe eNepal ngama-UAV.
Iziphetho lolu cwaningo ezinikeze zona ngokuya ngesimo sezulu esibikezelwayo, noma sesimweni esihle lapho iSivumelwano saseParis sigcwaliseka khona futhi namazinga okushisa aphakathi komhlaba engakhuphukeli ngaphezu kuka-1,5 ° C, azolahleka Ama-35% wesisindo seqhwa ngonyaka ka-2100.
Ngokukhuphuka kwamazinga okushisa acatshangelwe cishe ko-3,5 ° C, 4 ° C, no-6 ° C, kuzoba nokulahleka okukhulu okucishe kube ngu-49%, 51%, no-65% ngokulandelana.
Imiphumela yokulahleka kweqhwa
Kunzima ukucacisa imiphumela ukulahleka kweqhwa okuzoba nayo esimweni sezulu seplanethi. Okuqinisekile yilokho imiphumela ezoba nayo iyoba mibi. Ukuqhubeka nokwazi imiphumela yokuhlehla kwalezi zinguzunga zeqhwa, kudingeka ucwaningo olunzulu oluchaza izinqubo zomzimba nezenhlalo kusetshenziswa idatha evela emithonjeni eminingi, kufaka phakathi imiphumela yalolu cwaningo.
Lapho useduze nendawo yeqhwa, kubaluleke kakhulu Ngamanzi okuhlangana kwemisebenzi ehlukile yabantu. Yize kwezinye izindawo umnikelo wamanzi eqhwa ancibilika emifuleni mkhulu kunamanye, ingxenye eyomile esentshonalanga yesifunda, njenge-Indus Basin, incike kakhulu ekugelezeni okugeleza njalo kwamanzi ancibilikayo avela ezinguzungeni zeqhwa .
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Izinguzunga zeqhwa zase-Asia ziyancibilika ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu